Nhau - Mafuta-akanyudzwa Transformer & Dry Type Transformer
Bhokisi Rebazi reCable
Oiri-yakanyudzwa Transformer & Dry Type Transformer
Vadivelu Comedy Industry News
Transformer Energy Efficiency Improvement Plan
Munguva pfupi yapfuura, Bazi reIndasitiri uye Ruzivo rweTekinoroji, pamwe neHurumende Kudzora kweMusika Regulation uye National Energy Administration, vakapa iyo Transformer Energy Efficiency Improvement Plan (2021-2023). Zvinoenderana neChirongwa zvinodudzirwa sezvizvi:
Chii chinodiwa pakuumbwa nekuitwa kweChirongwa?
Iyo transformer ndiyo yekutanga midziyo yekutapurirana uye kugovera, inoshandiswa zvakanyanya mumaindasitiri, zvekurima, zvekufambisa, nharaunda dzemumaguta, uye mamwe minda.
China ine mamirioni gumi nemanomwe ekushandura ari kushanda mumambure, ane huwandu hunosvika mabhiriyoni gumi nerimwe eKVA.
Transformer kurasikirwa inokwana 40% yekurasikirwa kwemagetsi mukutapurirana nekugovera.
Inofungidzirwa kuti kupera simba kwegore negore inenge 250 bhiriyoni kilowatt-maawa, iyo ine simba guru rekuchengetedza simba.
Bazi reIndasitiri neRuzivo rweTekinoroji rakakurudzira kuenderera mberi kwekuvandudzwa kwesimba rekushandura simba, rakagadzira nekuita "Simba Rokugovera Shanduko Yesimba Kubudirira Kwekuvandudza Chirongwa (2015-2017)" pamwe chete neyaimbova General Administration yeHunhu Hwekutarisa, Kuongorora uye Kuongorora, uye National Development and Reform Commission, yekuvandudza huwandu hwekugovera wepamusoro-inoshanda transformer mbishi zvinhu, kubatanidza hwaro hwekusimudzira maindasitiri, uye kuwedzera kuedza kwekusimudzira.
Mabheji akati wandei e "Recommended Catalog yeNational Industrial Energy Saving Technology uye Equipment" uye "Energy Efficiency Star" Product Catalog yakapihwa, uye huwandu hwe437 marudzi emhando yepamusoro-soro ekushandura akakurudzirwa kune veruzhinji. Musi waChikumi 1, 2021, "Energy Efficiency Limits uye Energy Efficiency Levels of Power Transformers" (GB 20052-2020) ichaitwa zviri pamutemo.
Kuenzaniswa neyazvino chiyero (GB 20052-2013), iyo yekurasikirwa indekisi yemarudzi ese evashanduri muyero mutsva inoderera neanosvika 10-45%, izvo zviri nani pane zvinodiwa neakakodzera zviyero zveEuropean Union neUnited. States. Kuita kutenderera kutsva kwechirongwa chekuvandudza simba rekushandura simba, kusimudzira optimization uye kusimudzira yeindustry indasitiri cheni, uye kukurumidza kuvandudzwa kwesimba rekushandura simba kunobatsira kudzikisira kurasikirwa kwesimba rekutapurirana uye kugovera, kuvandudza kugona kwesimba remabhizinesi ekushandisa simba. , ichienderera mberi ichikurudzira girinhi, yakaderera-kabhoni uye yemhando yepamusoro kusimudzira, uye zvakare inobatsira kuwedzera kupihwa kwemusika unoshanda wekushandura uye kusimbisa madhiraivha matsva.
Ndezvipi zvinangwa zvikuru zveChirongwa?
Urongwa uhwu hunotarisa pakugadzirwa uye kushandiswa kwepamusoro-soro uye ekuchengetedza-simba-shanduko uye inoisa pamberi pehuwandu uye hwemhando yezvinangwa. Kune rumwe rutivi, kushanda kwepamusoro uye simba rekuchengetedza-shanduko muchikamu chekushanda kwetiweki chiri kuwedzera. Pakazosvika 2023, chikamu chekushanda chepamusoro-soro uye ekuchengetedza simba emagetsi (magetsi emagetsi anoenderana neNhare 1 uye Level 2 simba rekushandisa zviyero muGB 20052-2020 "Simba Transformer Energy Efficiency Limiting Value uye Energy Efficiency Giredhi") mune network ichaita. kuwedzera ne10%, uye nhamba yevachangobva kuwedzerwa yepamusoro-soro uye magetsi ekuchengetedza magetsi achaita mari inopfuura 75% mugore rimwe chete. Kune rumwe rutivi, cheni yeindasitiri yekushandura yakagadziridzwa uye yakakwidziridzwa, uye chiyero chekupa cheanoshanda uye anochengetedza-simba anoshandura anovandudzwa. Pamusoro pekutsvagisa nekusimudzira kwepamusoro-soro uye inochengetedza magetsi dhizaini dhizaini, kugadzira, kugadzirisa mashandiro, masevhisi ekubvunza, uye mamwe minda, kushandiswa kwebheti rekiyi yakakosha tekinoroji yezvigadzirwa, zvikamu, uye zvishandiso, zvakagadzira batch yebackbone mukana wekugadzira. mabhizinesi, anosimudzira batch yegirinhi yekugadzira system mhinduro mupi, inosimudzira zvakanyanya nhanho yemazuva ano yeindasitiri yeketani yekugovera, girini.
Ndeapi mabasa makuru eChirongwa?
Chekutanga, isu ticha mhanyisa tekinoroji innovation uye maindasitiri application.
Simbisa kutsvagisa nekuvandudzwa kweakakosha etekinoroji, kusimudzira hunyanzvi hwezvinhu uye tekinoroji yekushanda kwakanyanya uye inochengetedza magetsi emagetsi, tarisa pakugadzirisa dambudziko rekukwira kwevoltage bushing yevanoshandura, kusimbisa dhizaini uye kugadzirisa tekinoroji yehunyanzvi hwepamusoro uye simba. -Saving transformers yakadai sematatu-dimensional core structure, kuvandudza digitization, njere uye girini nhanho yevashanduri. Isu tichasimbisa basa rinotungamira remabhizinesi muhunyanzvi hwekuvandudza tekinoroji uye nekuvandudza kugona kwehunyanzvi hwemaketani emaindasitiri.
Chechipiri, isu tinosimudzira kugona kwedu kwegirinhi kugadzirwa uye kupa.
Tungamira mabhizinesi ekushandura kugadzira michina yavo yekugadzira kune otomatiki uye hungwaru. Mabhizinesi anorambidzwa kugadzira nekutengesa matransformer ari pasi pane zvinodiwa neiyo mitsva yenyika simba rekushandisa. Kuwedzera chikamu chepamusoro-soro uye ekuchengetedza magetsi emagetsi anoshandiswa mundima dzichiri kusimukira dzakadai sesimba rinodzokororwa, njanji yekufambisa, nzvimbo dzedata, nezvimwe, kusunungura uye kurima boka remabhizinesi ekuratidzira egreen supply chain, uye kuvaka boka rehunyanzvi hwepamusoro. uye kugadzirwa kwemagetsi ekuchengetedza magetsi uye masumbu ekugadzira.
Chechitatu, wedzera kusimudzirwa kwepamusoro-soro uye magetsi ekuchengetedza magetsi.
Kubva muna Chikumi 2021, vashanduri vatsva vanofanirwa kusangana nezvinodiwa zvemhando dzesimba renyika, kukurudzira kushandiswa kwemagetsi emagetsi, uye kuwedzera chikamu chemagetsi-anoshanda anoshanda mumaindasitiri, kutaurirana, kuvaka, kutakurwa, uye mamwe minda. Isu ticharonga nekuita ongororo pamusoro pekuchengetedza simba mumaindasitiri makuru, uye nekusimudzira kubviswa kwepasi-inoshanda matransformer. Mabhizinesi emagetsi emagetsi achakurudzirwa kugadzira nekuita chirongwa chechikamu-chekunze chevashanduri vakaderera. Kutanga kubva munaChikumi 2021, ma transformer achangobva kutengwa achave anoshanda zvakanyanya uye anochengetedza simba emagetsi.
Chechina, tichasimbisa kugona kwedu kupa masevhisi emaindasitiri.
Kuburikidza nekushandiswa kwakazara kwekuongororwa kwekuchengetedza simba, basa re "simba rekuchengetedza simba kumabhizinesi" rinoitwa kusimbisa kubatana pakati pekupa uye kudiwa uye kukurumidza kushandura uye kusimudzira kwevashanduri. -Saving certification, uye mamwe masevhisi anosimudzira masangano evashandi vehurumende kuti aongorore hupenyu hwesevhisi yemhando yevashanduri. Kurudzirai makambani ekuchengetedza simba kuti ape masevhisi esimba rekuchengetedza simba rimwe chete kumabhizinesi kuburikidza nemhando dzekushandira pamwe.
Ndeapi matanho ekuchengetedza ekusimudzira kuitwa kweChirongwa?
Kutanga, takasimbisa kurongeka nekuita.
Bazi reIndasitiri uye Ruzivo rweTekinoroji, iyo State Administration yeMusika Regulation, uye National Energy Administration vane basa rakabatana kuronga nekuita Chirongwa. Madhipatimendi akakodzera padanho repurovhinzi anofanira kupa nemoyo wose nhungamiro nemasevhisi, kujekesa hurongwa uye kutarisisa kuitwa kwemabasa. Masangano eindasitiri akakodzera uye mabhizinesi ehurumende yepakati anokurudzirwa kuti agadzire matanho ebasa zvinoenderana nezvinangwa nemabasa akaiswa muChirongwa ichi uye pamwe chete nemamiriro chaiwo eminda yavo nemabhizinesi, kuitira kuti vafambire mberi nenzira yakarongeka uye kuumba pamwe chete. masimba.
Chechipiri, tichawedzera rubatsiro rwemitemo.
Gadzira uye uvandudze iyo yakajairwa sisitimu yehunyanzvi hwepamusoro uye inochengetedza magetsi emagetsi, shandisa zvizere nzira dziripo dzehomwe kutsigira kusimudzira kwepamusoro uye simba rekuchengetedza magetsi ekushandura indasitiri, uye tsigira mabhizinesi ane hunyanzvi kunyorera marongero akasarudzika akadai serutsigiro rwehomwe, kuda mutero, vimbiso yemari, uye muripo weinishuwarenzi zvinoenderana nemirau. Tichavandudza hurongwa hwehurumende hwekutenga zvinhu zvakasvibirira uye tinokurudzira vanotenga zvinhu kuti vakoshese kutenga matransforma anoshanda zvakanyanya uye anochengetedza magetsi.
Chechitatu, kunyatsotarisisa uye manejimendi.
Bazi reIndasitiri neRuzivo rweTekinoroji, pamwe chete neState Administration for Market Regulation nemamwe madhipatimendi, yakasimbisa manejimendi panzvimbo, inorambidza mabhizinesi kugadzira nekutengesa matransformer anotadza kuzadzisa zvinodiwa zvesimba rekushandisa simba. Mabhizinesi anotadza kugadzirisa kana achiri kutadza kuzadzisa zvinodiwa mushure mekugadzirisa anozoverengerwa mumarekodhi avo ekutyora-trust kiredhiti zvinoenderana nemutemo nemirau. Mabhizinesi emagetsi emagetsi anofanirwa kurambidza ma transformer asingazadzise zvinodikanwa zvesimba rekushandisa mazinga kubva pakubatanidza kune grid.
Chechina, tichavandudza mamiriro emusika.
Isu tichapa kutamba kwakazara kune basa reakakodzera masangano ekutengeserana, masangano ekutsvagisa, uye masangano ekupa mazano. Tichasimbisa kuchinjana kwemitemo yepasi rose uye nhaurirano dzezvidzidzo, uye kusimudzira kubvumirana kwemaitiro ekugadzirisa simba uye zvigadziro zvekushanda kwepamusoro-soro uye magetsi ekuchengetedza magetsi. Iwo mabhizinesi ekumusana anokurudzirwa kushingaira kuwedzera musika wepasi rose, kusimbisa kudyidzana kwemaindasitiri nenyika dziri padyo ne "One Belt Uye Imwe Mugwagwa", uye kuwedzera pesvedzero yepasirese uye kukwikwidza kwepamusoro-soro uye inochengetedza magetsi ekushandura.
Nguva yekutumira: Jun-13-2019
Zvekubvunza nezve zvigadzirwa zvedu kana pricelist, ndapota siya email yako kwatiri uye isu tichabatana mukati memaawa makumi maviri nemana.kubvunza
Iyo kambani Guangdong Shengte Electric Co., Ltd.
© Copyright - 2021: Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa.